गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै चार करोड रुपैँया, यसरी छनौट गरिन्छ कामदार? – Gulminews
Home/समाचार/गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै चार करोड रुपैँया, यसरी छनौट गरिन्छ कामदार?
गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै चार करोड रुपैँया, यसरी छनौट गरिन्छ कामदार?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ जेष्ठ ३२, शनिबार १९:३८ मा प्रकाशित
गुल्मी, २३ जेठ । गुल्मीका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी सृजना गर्न झण्डै चार करोड रुपैँया बजेट बिनियोजन भएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकाको लागि तीन करोड ७१ लाख ६९ हजार रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टमा स्वकीय सचिव गणेश श्रीपालीले बताए । रेसुङ्गा नगरपालिकाको लागि ४१ लाख, मुसिकोट नगरपालिकाको लागि ३७ लाख र अन्य गाउँपालिकाहरुमा न्यूनतम २७ लाखदेखि अधिकतम ३१ लाखसम्म बजेट बिनियोजन भएको श्रीपालीले बताए ।
यो पनि पढ्नुस्: गुल्मीमा १५ हजार भन्दा बढीले दिए रोजगारीको लागि निवेदन: कुन स्थानिय निकायमा कतिको निवेदन?
झण्डै १७ सयले पाए रोजगारी
गुल्मीमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ धेरै स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह संचालन गर्ने तयारीमा छन् । जिल्लाको धुर्कोट, मदाने, मालिका, इस्मा, मुसिकोट, चन्द्रकोट लगायतका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । केन्द्रिय सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत बेरोजगारीको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । जसमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कुल १५ हजार तीन सय दुई जनाले बेरोजगार भएको फाराम भरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस्: गुल्मीमा व्यक्तिका गाेठ र बारीमा काम गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामदार
गुल्मीमा सबै स्थानीय तहमा गरी कुल एक हजार छ सय ८३ लाई ३० दिनसम्म रोजगार प्रदान हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत धुर्कोट गाउँपालिकामा एक सय ५० जनालाई रोजगारी दिइएको छ । जसमध्ये सडकमा ८१ जना, खानेपानी मर्मतका लागि १५ जना, कृषि र पशुपालनका लागि १५ जना, शिक्षामा १३ जना, स्वास्थ्यमा चार, सिँचाईमा १५ र विद्युतमा सात जनालाई लगाइएको सुचना अधिकारी इश्वरी भण्डारीले जानकारी दिए । इस्मा गाउँपालिकाले एक सय ३१ जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ ।
रोजगार पाएका सबैलाई सडकको क्षेत्रमा काममा लगाइएको रोजगार संयोजक बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए । छत्रकोट गाउँपालिकाले एक सय ३५ जनालाई रोजगारी दिएको छ । जसमध्ये धेरैलाई मन्दिर जाने पदमार्ग र सडक मर्मतमै खटाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए । मालिका गाउँपालिकाले पनि एक सय २६ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । गाउँपालिकाले पनि सडक र सिंचाई मर्मतमै केन्द्रित भएर रोजगारी दिएको प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।
जिल्लाका मुसिकोट नगरपालिकाले एक सय ६९ जनालाई रोजगारी दिएको छ । रोजगार पाएकाहरुलाई पोखरी निर्माण, चौपारी चिन्ने, बृक्षारोपण, घोडेटो बाटो निर्माणदेखि सरसफाईका काममा खटाइएको छ । नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले सवैजनालाई अनुशिक्षण मार्फत प्रशिक्षित गराएर काममा लगाइएको बताए । उनले समुहमा केहिलाई पुराना पोखरी मर्मत गर्ने, नयाँ निर्माण गर्ने, जिर्ण पुराना चौपारी मर्मत गर्ने र सार्वजनिक स्थल, बजार तथा सरकारी कार्यालय वरपर सरसफाईको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए ।
नर्सरी व्यावस्थापन, शिक्षक र नर्समा रोजगारी
मदाने गाउँपालिकाले भने नर्सरी व्यवस्थापन, शिक्षक र नर्समा रोजगारी दिएको छ । रोजगारीका लागि छनोट भएका एक सय ३४ जनामध्ये धेरैलाई नर्सरी व्यावस्थापनमा लगाइएको छ । त्यस्तै सिएमए पढेकी एक जनालाई वडा नं ७ भनभनेको स्वास्थ्यचौकीमा र आइए पास गरेका एक जनालाई सोहि वडाकै बालबोध प्राविमा शिक्षकको रुपमा एक महिना नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेश भण्डारीले बताए । साथै सडक मर्मतमा पनि केहिलाई व्यावस्थापन गरिएको उनले बताए ।
जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले कुल एक सय ८५ जनालाई रोजगारी दिएको छ । भने चन्द्रकोट गाउँपालिकाले एक सय ३५ र मालिका गाउँपालिकाले एक सय २६ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । कालिगण्डगी गाउँपालिकामा एक सय २२, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एक सय ३५, रुरु गाउँपालिकामा एक सय २६ र सत्यवती गाउँपालिकामा एक सय ४० जनालाई रोजगार प्राप्त हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुस्: यस्तो देखियो रेसुङ्गामा हिउँ खेल्नेको भीड: पाल्पा र अर्घाखाँचीबाट समेत हिउँ हेर्न र खेल्न गुल्मीमा
कसरी छनौट गरिन्छ कामदार?
सबैजसो स्थानीय तहमा २०७५ चैत १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म वडा कार्यालयमार्फत बेरोजगारीको तथ्याकं संकलन गरिएको थियो । जसमा गुल्मीका १५ हजार तीन सय दुई जनाले फारम भरेका थिए । फारम भरेकाहरुमध्ये रोजगार सेवा केन्द्रको रोहवरमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले श्रमिक छनोट गरेको थियो । जसमा निर्वाहमुखि कृषि गरिरहेको, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको, अति कम आम्दानी हुने तथा न्यून वर्गको आधारमा छनोट गरिएको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख दोर्ण खत्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले हरेक नेपालीको बैंक खाता हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ले पनि सहयोग गर्ने भएको छ । किनकि श्रमिकहरुको मजदुरी खातामा जम्मा हुनेछ । जसका लागि प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको बंैकमा खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसपछि गाउँपालिकाले उनीहरुको खातामै रकम जम्मा गरिदिनेछ । सरकारले विभिन्न नौ वटा क्षेत्रमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तरगतका श्रमिकलाई काम लगाउने छ । जसमा सडक मर्मत तथा निर्माण, कृषि, सिँचाई, ग्रामिण क्षेत्रका खानेपानीको योजना, स्वास्थ्य तथा सरसफाई रहेका छन् । त्यस्तै विद्यालयका भवन वा वगैचा निर्माण, बन तथा जलाधारको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारले निर्णय गरेका क्षेत्रहरुमा श्रमिक काममा जानुपर्ने इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले जानकारी दिए ।
समान ज्यालाले महिलामा उत्साह
धेरैजसो कामका क्षेत्रहरुमा महिलाको भन्दा पुरुषको ज्याला बढी हुने गर्दछ । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समान ज्यालाको व्यवस्था छ । जसले गर्दा महिलाहरुलाई काममा हौसला मिलेको छ । ‘काम एउटै तर ज्यालामा आधा फरक हुन्थ्यो ।’ इस्मा गाउँपालिका ६ कि संगिता गौतमले भनिन्, ‘यो कार्यक्रममा समान ज्याला रहेछ, खुसि लाग्यो ।’समान ज्यालाले गर्दा आफुहरुजस्ता महिलाहरुलाई काम गर्न पनि हौसला बढ्ने उनले बताइन् ।
स्थानीय तहको आफ्नै रोजगारी
अहिले संघिय सरकारले संचालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एक महिनाको लागि हो । त्यसपछि अर्को बर्षबाट पुनः कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाइएको छ । तर जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले रोजगारीको सिर्जना गरेका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले ९० जनालाई वैशाख १ गतेबाट लेन्थ वर्करको रुपमा रोजगारी दिएको छ । ०७६ को नयाँ बर्षको दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले उनीहरुलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका थिए । त्यसका साथै नगरपालिकाले ६८ जनालाई डकर्मी तालिम प्रदान गरेको र उनीहरु अहिले गाउँमै स्वरोजगार भएको नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताए ।
इस्मा गाउँपालिकाले पनि २० जना लेन्थ वर्कर नियुक्त गरी रोजगार प्रदान गरेको छ । १२ महिनाको लागि नियुक्त गरिएका लेन्थ वर्करले नियमित रुपमा सडकको क्षेत्रमा काम गर्ने गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण विष्टले बताए । ‘निर्वाचनताका पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौँ ।’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता पुरा हुँदै गएको छ ।’ जिल्लाको धुर्कोट, मालिका लगायतका स्थानीय तहले विभिन्न तालिमहरु संचालन गरी आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्दै आएका छन् ।